भर्जिन कपाल बण्डल सम्झौता: रेमी प्राकृतिक बनावट सस्तोको लागि खरीद गर्नुहोस्
पृष्ठमा 12 देखाउनुहोस् पृष्ठमा 24 देखाउनुहोस् पृष्ठमा 48 देखाउनुहोस्
रेटेड 4.695बाहिर
रेटेड 4.795बाहिर
घुम्न बाल बंडल
Afro Kinky बंडल
रेटेड 4.805बाहिर
हड्डी सीधा बंडल
सर्वश्रेष्ठ वेर्गेन रिमी मानव बाल बंडल
यहाँ मेरो प्राकृतिक HIAr विस्तारहरूमा, हामी हाम्रा उत्पादनहरूमा गर्व गर्छौं। हाम्रो एक्सटेन्सनहरू सिर्जना र रंगका महिलाहरु द्वारा रंग महिलाहरु को लागि तैयार गरिएको छ! हाम्रो ब्रान्ड कुखुरा रेमी एक्सटेन्सन गर्दछ। वर्जिनको अर्थ भनेको कपाल कडा क्यान्सरबाट मुक्त हुन्छ र रेमीले टाइललिंग समस्याहरूलाई कम गर्न एकै दिशामा पङ्क्तिबद्ध हुन्छन्। हामीसँग बिस्तारै छ कि हाम्रो सबै बहिनीलाई खान्छ। हाम्रो कम्पनीलाई "मेरा प्राकृतिक हेयर एक्सटेन्सन" भनिन्छ, तर हामीसँग हाम्रो रिसेक्सन डिभिजनको लागि विस्तार छ!
हाम्रो प्राकृतिक विस्तार रेखा घुमाई, किन्की घुमाई, कोइली, साथै एरिरो किन्कीलाई सुविधा दिन्छ! म निश्चित छु कि तपाईं आफ्नो सही मिश्रण पाउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो सीधा एक्सटेन्सन लाइनमा Perm Yaki, Coarse Yaki, र किन्की सीधा संग्रहहरू छन्। हाम्रो सबै बन्डलहरूसँग मेल खाने समापन छ। नजिकैको भविष्यमा छिटो अगाडिको प्रस्ताव प्रस्ताव गरिनेछ। हाम्रो बन्डलहरू उच्च गुणस्तर 100% मानव कुञ्जी रेमी कपाल हुन्।
यदि तपाइँ यो पढ्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं एक्स्टेन्सनको उत्कृष्ट सेट प्राप्त गर्नका लागि सही बाटोमा हुनुहुन्छ जुन तपाईंको कपाल संग अचम्म लाग्दो मात्र होइन तर बालीको विकासलाई बढावा दिन्छ। उचित विस्तारले सही तरिकाले लागू गर्यो तपाईंको कपाल बढेको र अचम्मको सुरक्षात्मक शैली सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ। आफ्नो छुट्टी बाहिर हानिकारक र अन्य संग मिश्रण गर्न कोसिस रोक्नुहोस् प्राकृतिक कपाल बन्डलहरू। तपाईंको प्राकृतिक कपाल बढाउनुहोस्, यसलाई परिवर्तन नगर्नुहोस्!